January 2021 - Celegroup
အိပ်ပျော်ပါစေ….စိတ်ပျော်ပါစေ အိပ်မပျော်တော့ ညတာရှည်တယ်စိတ်မပျော်တော့ ဘဝမှာဖြေစရာ ရှားတတ်တယ်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ ယှဉ်ရင် ညတစ်ညက ခဏလေးပါ ဒါပေမယ့် ဒီညကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရရင် နောက်တစ်နေ့ကိုပါ -လက်လွှတ်ရလိမ့်မယ်ညပေါင်းများစွာ အိပ်မပျော်ခဲ့ရင် မနက်ပေါင်းများစွာ မလန်းမဆန်းနဲ့ ထုံထိုင်းနေရဦးမှာပဲ !! သံသရာနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ဘဝဆိုတာ ခဏလေးပါပဲ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းလွန်းလို့ လူ့ဘဝရလာပြီးမှ ငြီးငွေ့စိတ်ပျက်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအိပ်ပျော်အောင် သာသာယာယာနေပျော်အောင် ထူးထူးခြားခြားကြိုးစားစရာမလိုပါဘူး !!! အရှုံးမပေးပါနဲ့ ဒါပေမဲ့ အလျှော့ပေးတတ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ် အားတော့တင်းထား […]
ဖတ်ကြည့်ပါ တစ်ခုခုတော့ ရမယ်ထင်ပါတယ်
ဖတ်ကြည့်ပါ တစ်ခုခုတော့ ရမယ်ထင်ပါတယ် လူ ပဲတစ်ခါတရံတော့ မှားမှာပေါ့ ။မှားပါ ဒါပေမဲ့ အမှားတွေ မများအောင်တော့ကြိုးစားရမယ်အမှားတွေနဲ့ နေသားကျသွားမှာ စိုးလို့ပါ လူ ပဲတစ်ခါတရံတော့ အားငယ်တတ်တာပေါ့ ငယ် ပါ ဒါပေမဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို အားငယ်မှုတွေနဲ့ အချိန်မကုန်အောင်တော့ ကြိုးစားရမယ် ကြာရင် အားတွေကုန်မှာ စိုးလို့ပါ !! လူ ပဲတစ်ခါတရံတော့ မာန်မာနလေးတွေရှိမှာပေါ့ ရှိ ပါ ဒါပေမယ့် လူ့အသိုင်းဝိုင်းမှာ လူရာဝင်ဖို့အတွက် မာန်မာနကို […]
ကိုယ်သာ အရှင်သခင် ဖြစ်ပါစေ
ကိုယ်သာ အရှင်သခင် ဖြစ်ပါစေ လမ်းဆုံးရောက္မှ လေးလေးပင်ပင်ကြီးနဲ့ သယ်လာတာက အမှိုက်ကြီး ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ကြတယ်။သုံးသင့်သလောက် သုံး။ရှာသင့်သလောက် ရှာ။ပိုက်ဆံရှာရင်း ပျော်တတ်ပါစေ။ ငွေဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြားခံပစ္စည်း တစ်ခုပါ။ငွေကို ဘုရားလို ကိုးကွယ်သွားရင်တော့အရူးတစ်ယောက်လို အလုပ်လုပ်ပေတော့. . ။ ငွေကြောင့် လူဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆရင် ငွေက နတ်ဘုရား။လူကြောင့် ငွေဖြစ်လာတယ်လို့ ယူဆရင်ကိုယ်ကငွေရဲ့အရှင်သခင်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်ကြိုးစားလွန်းလို့သေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။စင်္ကာပူမှာလည်း နေ့ညမအား ဘဝပျောက်နေတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေ ရှိပါတယ်။ဒေါ်လာသန်းချီတန်တဲ့ ကွန်ဒိုဝယ်ပြီးညအိပ်ချိန်သာ အိမ်ပြန် […]